२०७४ मा लक्ष्मी पुजा गर्ने तरिका - IAUA
२०७४ मा लक्ष्मी पुजा गर्ने तरिका
ramkrishna October 19, 2017	२०७४ मा लक्ष्मी पुजा गर्ने तरिका
सिजन परिवर्तन भएको छ; रोशनीहरू रोशनी-ग्लिन भएका छन् र मैदानमा सजिलै लगाउँछन् कि रोशनीको उत्सव तपाईंको प्रवेशवाटमा थम्बनेल हो। यो खुसी दिन, धन, सफलता, भाग्य र असाधारण लक्ष्मी को हिन्दु देवी को पूरा गर्न को लागी बनें। दीवाली डेसर्ट, आतिशबाजी, र अग्रिम र कार्ड बजाउने साथ पर्याय छ। यी अभ्यासहरू भन्दा अघि, पहिलो समारोहमा, जुन व्यावहारिक रूप देखि हरेक भारतीय परिवारमा प्रदर्शन गरिन्छ, देवी को पूरा गर्न को लागी ‘लक्ष्मी पूजा’ को प्रयोग हो। हामी तपाईलाई खुलासा गर्नेछौं कि लक्ष्मी पूजालाई यो दिवालीलाई कसरी लक्षित गर्ने भन्ने लक्ष्य छ कि तपाईलाई देवीदेवताले उनको स्नेह सफलता र सफलताको रूपमा। आफ्नो मनोचिकित्सा, शरीर, र आत्मालाई पूर्ण बनाउनुको लागि सही जीवन शैली को गेसुद्ध को एक मौका दिनुहोस!
पारंपरिक पूजा गर्न को लागी तरिका:
पजा प्रक्रियाको सुरुवात अघि ब्याटमा दायाँबाट सफागर्दा सफा अभियान सुरु हुन्छ। तपाईलाई कम से कम सफा गर्नु पर्छ जहाँ लक्ष्मी लक्ष्मीको ‘असान’ (देवीलाई आराम गर्न लागिएको छ) बनाइनेछ। तपाईं क्षेत्र को परिष्कृत गर्न पनि ‘गंगा जला’ को उपयोग गर्न सक्छन्, एक पल्ट सफा गरे पछि।यसबाहेक, के उठाएको चरणको सेटिङ अप पछि के हुन्छ? जब तपाईंले देवीलाई राख्नु भएको छ भने, तपाईंले सजिलै बढावाको चरण बनाउनु पर्छ र यसमा रातो छाया लगाएको कपडा राख्नु पर्छ। सामग्रीको केन्द्रित बिन्दुमा, पखललीले अन्नको अण्डाको गुच्छा राख्दछ। माला लक्ष्मी को लागि पवित्र स्थान पछि प्रभावित छ, तपाईं चरण को अनुसरण गर्दै छन् कि एक ‘कलश’ (बर्तन) को स्थापित गर्न देखि बचने को लागि, जो उठाया चरण मा राखन को लागि नहीं रहन सक्छ। नतिजा, पानी, एक supari, एक संग्राहक खिल, सिक्का, र चावलको साथ ‘कलश’ भरेर सुरु गर्नुहोस्। तपाईं त्यसै गरी पाँच माओको पातहरू राख्नु आवश्यक छ, जुन ‘कलश’ को भागको रूपमा प्रयोग गरिनेछ (र भित्र राख्नुहोस्, एक ढाँचामा जुन तिनीहरू उभरन्छन्)।
एकपटक पागल र बोल्टहरू गरेपछि, तपाईं अब सक्षम हुन सक्नुहुनेछ, व्यवस्थाको निम्न राउन्ड, जसको पछि लागी देवी लक्ष्मी र गुरु गणेशलाई कलशमा सेट गरिनेछ। वर्तमान मा, माईको पातले ‘कलश’ भित्र सेट गरिसके पछि, पछिल्ला चरणले ‘पारंपरिक पुजा की थली’ स्थापना गरेको छ, चावल अनाज सहित, जुन स्ट्याकमा राख्नु पर्छ (धेरै उच्च छैन)। त्यस समयमा, हल्दी पाउडर (अन्यथा ‘haldi’ भनिन्छ) को सहयोगमा, यसमाथि कमल बहाव राख्नुहोस्। एकपटक तपाईं रेखाचित्र समाप्त भएपछि, आफ्नो उत्कृष्ट लक्ष्मी प्रतीकलाई निरन्तरता दिनुहोस्। सबैको रूपमा चिनिन्छ, देवी लक्ष्मी व्यवसायको असहयोगी स्वभाव हुन्, उदारताले केही सिक्का पहिले प्रतीक (माई हर्षित हुनेछ)।
हिन्दू लोकगीत द्वारा संकेत को रूप मा, शासक गणेश को एक पूजा या पूजा को समय मा कुनै भगवान या देवी को सामने बुलाया छ। यस प्रकार, तपाईं समान ‘Kalash’ को सही पक्षमा Ganpati प्रतीक राख्न को आवश्यकता हुनेछ (यो दक्षिण-पश्चिम हेडिंग सुनिश्चित गर्न)। हाम्रो हिन्दू धर्मको समारोहको अनुसार, मन्दिरमा हल्डी-कुमकुम तिलक राखेर शासकलाई स्वागत गर्दछ। Ganpati चिन्हमा केही चावल अनाजहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्। एक पटक लक्ष्मी-गणेश प्रतीक जानबूझेर राखिएको बेला, तपाईं आफ्नो पुस्तकहरू, पेन वा कुनै पनि व्यक्तिलाई ठाँउ राख्नुको साथै ईश्वर र देवीको अनुभूति हेर्न सक्नुहुन्छ (तपाईलाई तपाइँको बुबासँग पहिचान गरिएको छ)। यस कामको साथ, अहिले रोशनीको प्रकाश गर्ने एक आदर्श अवसर हो।
दीपाली मा लक्ष्मी पूजा को कैसे प्रदर्शन तिहार को हिन्दू-चरण द्वारा कदम निर्देश लक्ष्मी पूजा गर्न को लागी
पजा प्रक्रियाको सुरुवात अघि ब्याटमा दायाँबाट सफागर्दा सफा अभियान सुरु हुन्छ। तपाईलाई कम से कम सफा गर्नु पर्छ जहाँ लक्ष्मी लक्ष्मीको ‘असान’ (देवीलाई आराम गर्न लागिएको छ) बनाइनेछ। तपाईं क्षेत्र को परिष्कृत गर्न पनि ‘गंगा जला’ को उपयोग गर्न सक्छन्, एक पल्ट सफा गरे पछि।
तपाईंले देवीलाई राख्नु भएको छ भने, तपाईंले सजिलै बढावाको चरण बनाउनु पर्छ र यसमा रातो छाया लगाएको कपडा राख्नु पर्छ। लक्ष्मीको लागि पवित्र स्थान पछि प्रभावकारी हुन्छ, तपाईं एक ‘कलश’ को स्थापना गर्नदेखि जोगिन सक्नु भएको चरण हो। नतिजा, पानी, एक supari, एक संग्राहक खिल, सिक्का, र चावलको साथ ‘कलश’ भरेर सुरु गर्नुहोस्। तपाईं त्यसै गरी पाँच माओको पातहरू राख्नु आवश्यक छ, जुन ‘कलश’ को भागको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। वर्तमान मा, माईको पातले ‘कलश’ भित्र सेट गरिसके पछि, पछिल्ला चरणले ‘पारंपरिक पुजा की थली’ स्थापना गरेको छ, चावल अनाज सहित, जुन स्ट्याकमा राख्नु पर्छ (धेरै उच्च छैन)। त्यस समयमा, हल्दी पाउडर (अन्यथा ‘haldi’ भनिन्छ) को सहयोगमा, यसमाथि कमल बहाव राख्नुहोस्। एकपटक तपाईं रेखाचित्र समाप्त भएपछि, आफ्नो उत्कृष्ट लक्ष्मी प्रतीकलाई निरन्तरता दिनुहोस्। सबैलाई थाहा छ, देवी लक्ष्मी व्यवसायको हाम्रो अतुलनीय स्वभाव हो, उदारताले केही सिक्का पहिले प्रतीक (माई हर्षित हुनेछ) राख्दछ .त्यो हिन्दू लोकगीत द्वारा संकेत गरे पछि शासक गणेशलाई कुनै भगवान वा देवी को पूजा गरिसके पछि पूजा गरिन्छ वा हवन। यस प्रकार, तपाईं समान ‘Kalash’ को सही पक्षमा Ganpati प्रतीक राख्न को आवश्यकता हुनेछ (यो दक्षिण-पश्चिम हेडिंग सुनिश्चित गर्न)। हाम्रो हिन्दू धर्मको समारोहको अनुसार, मन्दिरमा हल्डी-कुमकुम तिलक राखेर शासकलाई स्वागत गर्दछ। Ganpati चिन्हमा केही चावल अनाजहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्। एक पटक लक्ष्मी-गणेश प्रतीक जानबूझेर राखिएको बेला, तपाईं आफ्नो पुस्तकहरू, पेन वा कुनै पनि व्यक्तिलाई ठाँउ राख्नुको साथै ईश्वर र देवीको अनुभूति हेर्न सक्नुहुन्छ (तपाईलाई तपाइँको बुबासँग पहिचान गरिएको छ)। यस कार्यको साथ, अहिले रोशनीलाई प्रकाश गर्न एक आदर्श अवसर हो। विज्ञापन एक अद्वितीय दीवाली दैत्य प्रकाश र यसलाई ‘पूजा को थली’ मा राख्दछ।
साथै, यसको साथमा थप चावल अनाज कुमकुम र फूलहरू राख्थे। तपाईं पनि त्यस्तै छ कि एक गिलास पानीलाई अलग राख्न को लागी पछाडि प्रयोग गर्न को लागी आवश्यकता पर्छ। वर्तमानमा, जब तपाइँ ‘कलश’ मा ‘तिलक’ राख्ने पुजा-सुरु गर्न जारी राख्नुहुन्छ, यसको अतिरिक्त यसलाई एक गिलास पानीमा लागू गर्नुहोस् जुन तपाईंले यसलाई पूजाको लागि अलग राख्नुभयो। केहि ब्ल्लो पनि प्रस्ताव गर्नुहोस्। धेरै मानिसहरू मजाको उद्देश्यसँग विभिन्न प्रकारका पातका प्रयोग गर्न चाहन्छन्। यो भारतमा धेरै सरल छ तर यो पछ्याउन खतरनाक काम हो। यो patakas तपाईं खुशी दिन सक्छ तर तिनीहरूले अनावश्यक रूपमा प्रयोग गरिन सक्छ भने यसले विभिन्न क्षति र समस्या ल्याउन सक्छ, यसैले मानिसहरू विशेषतया बच्चाहरु को हानिकारक हुन को लागी यस प्रकारका पातका द्वारा गरिन्छ र त्यस्तो खतरनाक चीजहरूको प्रयोग प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। देवीको टाउको दुख्ने बाटो बन्द मौकामा तपाईं जान्नुहुन्छ कि कसरी लक्ष्मी मियाको वैदिक मन्त्रलाई सही ढंगले सुचारु बनाउनु हुन्छ – त्यसोभए तपाईले जबरजस्ती गर्न सक्नुहुन्न। केही बप्तिस्मा र चावल अनाजहरू आफ्नो हातमा लिनुहोस्, पूर्ण समर्पणको साथ आफ्नो आँखा बन्द गर्दिनु अघि आफ्नो टाउको धनु र उनको आशीर्वादको नाउँको नाममा राख्नुहोस्। केही समय पछि, देवी र चावल को देवी को लागी बुझन को लागी .एक पल्ट देवी को पुर्खा गरे पछि लक्ष्मी आइकन ले लो र प्लेट मा राखयो, पानी संग धोने को।
‘पंचामृत’ राख्नुहोस्, र अनियमित पानीको साथमा फेरि आइकनलाई सफा गर्नुहोस्। वर्तमानमा, पानीलाई सफा गर्नुहोस्, पानी सफा गर्नुहोस् र यसलाई कल्याणमा राख्नुहोस्। जान्नाले तपाईंको हलिडी-कुमकुम तिलकलाई मातृ देवीलाई लागू गर्न को लागी हो, र हाँ चावल अनाजलाई ध्यान दिनुहोस। भित्ताको एक नयाँ बनाइएको फिडको साथ देवीलाई स्वागत छ। तपाईं त्यसै गरी केही मार्गील्ड र बेल प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सुगन्धित महसुस गर्न, देवीको सामु केहि धूप पनीहरु लाई उज्ज्वल पार्नुहोस् .तपाईँले देवी को पेशकश गर्न को लागी केहि डिसर्टहरु लाई पूरा गर्न को लागी, किनकि यो शानदार मिथिसा को उत्सव हो। देवीको सामुको नारियल राख्नुहोस्। तपाईं पनि एक supari पट्टी मा सुपररी राख्नु पर्छ र फेरि केहि haldi-kumkum र चावल अनाज संग बढाव गर्नु पर्छ। त्यसोभए केहि भाडामा भाला, धनुषाको बीउ, र जीरा बीउ समावेश गर्दछ। त्यसोभए उनीहरुका अनुसार उनीहरुसंगको सम्बन्धमा उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ। एक साथ देवी। ढोका खोलेपछि हामी आफैलाई देवी लक्ष्मी र हाम्रो वैधानिक मागको लागि भगवानलाई अगाडि बढाउदै थियौँ। भगवानको खोजीमा लम्मी पूजा गर्ने प्रयास गरिरहेकी छिन्। यसबाहेक, दीवालीमा हिन्दु देवता पूजाको तयारी: तपाईको सम्पूर्ण सफा गर्नुहोस् घर राम्रो। कोब्स को साफ गर्नुहोस, खिडकियों को मच र फर्नीचर को टुकडा राम्रो तरिकाले। केहि चीज खारेज गर्नुहोस् जुन तपाइँ प्रयोग गर्न योजना छैन। घरभित्र जम्मा भएका कचौराको पछि लागे। यसले अवरुद्ध ऊर्जा सफा गर्न सक्छ र तपाइँ क्षेत्र निर्माण गर्नेछ र तपाईंको घरमा ईश्वरको लागि प्रेरणात्मक ऊर्जा बनाउनेछ।
Previous Previous post: तिहार पर्व : लक्ष्मी पुजा गरिँदै
Next Next post: लक्ष्मी पुजाको शुभ साइत राति १० बजेर १८ मिनेटमा, यसरी गर्नुहोस् लक्ष्मी पुजा